4 launchers for Android ah oo aad jeclaan doonto | Androidsis
4 launchers Android ah oo aad jeclaan doonto
Dunida Android waxay u oggolaaneysaa qaabeynta kuwa aad adeegsadayaashu runtii way ku faanaan, gaar ahaan marka la barbardhigo kuwa haysta iPhone-ka la socda iOS-ka oo aan lahayn JAILBIL. Dhab ahaantii mid ka mid ah qaybahaas waxaan ku sharaxay saldhigyadeeda ugu fudud mid ka mid ah casharradeenna loogu talagalay bilowga ugu habboon kuwa idinka bilaabaya adduunkan. Waxaan ula jeedaa dabcan kan rido, oo aad ka soo dejisan karto Google Play ama dukaamada kale ee codsiyada isla markaana ka dhigi karto taleefankaaga casriga ah mid kale, oo aan weli la aqoonsan karin.
Laakiin inta udhaxeysa launchers waxaa jira farqi badanMarka la eego garaafyada, mawduucyada iyo shaqeynta, waxaan ka helnaa barnaamijyo horumarsan heerarka oo dhan iyo kuwa kale oo wali leh horumar. Si hufan markii aad u dooranaysid mid ka mid ah kan dambe, isticmaale laylis ah ayaa ku dambayn kara inuu ku hungoobo qaacidadan qaabeynta oo uu gabi ahaanba isaga tago. Marka hadafkeenu maanta waa inaan kaa dhigno soo jeedin 4 launchers ah oo loogu talagalay Android oo aad jeclaan doonto, ama ugu yaraan inaad ka heli doonto shaqeyn taas oo ah inay runtii yihiin qalab caqli badan. Kadib hal naqshad ayaa kaa dhaadhicisa wax ka badan mid kale, durba waa arrin dhadhan shaqsiyeed.
1 4 launchers Android ah oo aad jeclaan doonto
1.1 Launcher Appex
1.2 Nova La Shaqeeye
1.4 Bilawga soo socda
Waa midda aan kugu tusnay shaashadda shaashadda ee aan maanta ku fureynay qoraalkeenna. Waxay kasbatay meel ka mid ah kuwa ugu ixtiraamka badan adduunka ee boosteejooyinka OS-kan. Oo waxay ku samaysay sidaas ku saleysan laba dhisme. Midka hore waa sidaas laga beddeli karo sida ay noqon karto. Midka labaad ee ku habboon waxqabadka iyo qaabeynta shaashadda adeegsadaha laftiisa, taas oo u sahlaysa waxyaabaha isaga u fudud.
Waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu guulaha badan, in kasta oo guusha badanaa ay ugu wacan tahay horumarka joogtada ah ee lagu waafajiyay cusbooneysiinta. Fududeyntu marwalba waxay ahayd furaha, iyo waliba ugu badnaan ku habboonaanta iskudayida ku dayashada shaashadda asalka ah ee Android, taas oo ah, ka saarista lakabyada la heli karo ee adeegsadayaasha adeegsadayaasha horay loo yaqaan. Waxay sidoo kale u taagan tahay wax soo saarka waxay noo ogolaaneysaa inay naga caawiso abuuritaanka shaashado cusub oo aan dalbanno kuwa hadda jira si sahlan loogu heli karo.
In kasta oo naqshadeedu sidoo kale doonayso inay aad ugu ekaato waxa naloogu soo bandhigayo asalka Android, runtu waxay tahay inaan helno ikhtiyaar inyar sii socda. Qalab yar, laakiin dhammaantood waxtar leh oo hal-abuur leh; habeynta waxyaabaha loo yaqaan 'widget' ee aan jeclahay iyo xawaare layaableh kuwa ugu cagajiida badan ee badalaya inuu yeesho a launcher on Android.
Solo Launcher-Nadiif, Sifiican, DIY
Bilawga soo socda
In kasta oo naqshadeynta, waxqabadka iyo waxqabadka aanan dhihi karin waa mid ka mid ah Android launcher Waan ku faraxsanahay arrintaas, waan ogahay in codsigu leeyahay dhagaystayaal aad u qeexan, oo laga yaabee in qaar ka mid ah akhristayaashayada ay si hufan u eegeen cutubkeenna maanta suurtagalnimada 3D. Dhab ahaantii taasi waa waxa soo socda ee soo socda. Ma xuma dhan, laakiin waxaan hayaa sawirada 2D caadiga ah maalin ilaa maalin.
Waxaad leedahay kale furaha Maxaad jeceshahay oo aad rabtaa inaad wadaagto si liiskan uu uga weynaado? Miyaad u maleyneysaa in kuwa maanta qaarkood ay ka duwan yihiin kuwa kale maxaa yeelay waxaad isku dayday dhowr? Noo sheeg faallooyinka, waad ogtahay inaan jecel nahay!
Macluumaad dheeraad ah - Tirooyinka Android augur xukun buuxa OS (Infographic)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 4 launchers Android ah oo aad jeclaan doonto
gaby alvarez dijo
Dodol launcher * w *
Ku jawaab gabi alvarez
Ku jawaab 4D
Shaki la'aan, waxaad ka tagtay furaha MiUi kan ugu fiican illaa iyo hadda. Dhamaan wanaag.
Aniga ahaan tan ugu fiican dhamaan dalabyada loogu talagalay Android shaki la’aan Launcher Launcher: habeyn xad dhaaf ah iyo waxqabad aan caadi aheyn.
Ku soo jawaab ElectricSid
Luis Japo Espinoza Paz dijo
Holo Launcher HD 😀
Jawaab Luis Japo Espinoza Paz
3 teebabka Android waa inaad isku daydaa haddii taada aysan ku qancin
Saddexda tiir ee ay ku xiran tahay Android Wear